Maxaa La Gudboon Madaxweyne Farmaajo Oo Muddo bil ah ku Magacaabi Waayay Ra’iisul Wasaare? | Gaaroodi News
Muddo hal bil ah ayaa laga joogaa markii uu xilkiisa waayay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, walina lama soo magacaabin qofkii baddali lahaa. Maxaa la gudboon madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
30 maalmood ayaa laga dhowrayay madaxweynaha inuu ku dhawaaqo magaca Ra’iisul Wasaare cusub, waana waqtiga sharciga ah ee loo qabtay inuu kusoo gabagabeeyo xulashadiisa.
Dad badan waxay isweydiinayaan waxa xiga haddii uu madaxweynaha waqtigii loogu talagalay kusoo magacaabi waayo Ra’iisul Wasaare cusub.
Xildhibaan/Danjire Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, oo ah siyaasi iyo diblomaasi rugcaddaa ah, in badanna siyaasadda Soomaaliya iyo diblomaasiyaddeeda ku jiray, ayaa BBC-da uga warramay waddada u furan madaxweynaha, maadaama uu waqti dheer ku qaatay soo magacaabista madaxa xukuumadda.
“Madaxweynaha muddada uu kusoo magacaabi karo Ra’iisul Wasaaraha waa 30 maalmood. Haddii ay soddonkaas maalmood ka dhammaato, haddana wuxuu qaab maamul ah ula soo xidhiidhi karaa guddoomiyaha baarlamaanka, isagoo ka dalbanaya in waqti macquul ah oo dheeraad ah loogu daro si uu, wadatashiyo dheeraad ah usoo sameeyo ugu dambeynna ugu soo magacaabo Ra’iisul Wasaaraha. Marka u maleyn maayo in dhib dhinaca dastuurka ah ama mid siyaasadda ah uu ka imaanayo arrintaas.” ayuu yidhi danjiraha.
Waxa uu sidoo kale sharraxay arrin in muddo ahba la isla dhex marayay oo ku saabsan inuusan jirin qodob sharci ah oo dhigaya in madaxweynaha la siiyo 30 maalmood oo kale.
Xildhibaan Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya in mudadadii hore kaddib uu madaxweynaha dib ugu laabanayo Golaha Shacabka iyo in kale.
“Madaxweynuhu uma baahna inuu ku laabto Baarlamaanka. Waxaa si gaar ah u wada hadlaya isaga, guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha maamulka Baarlamaanka, oo la yidhaahdo golaha joogtada ah, sidaas ayey u xeerinayaan arrinta,waana dhaqan horay loo soo arkay.”
Ma jirto muddo cayiman oo madaxweynaha ay ugu egtahay in uusan ka dib marin karin soo xulashada Ra’iisul Wasaaraha, sida uu sheegay Danjire Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil.
“Horayba way u dhacday in madaxweyne uu ku filnaan waayo waqtigii loo siiyy in uu howshaas ku fuliyo, xitaa waxaa horay u dhacday in Ra’iisul Wasaare uu golihiisa wasiirrada kusoo dhisi waayo muddadii loo qabtay, laakiin mar kasta waxaa jira waqti caqligal ah oo loo kordhiyo. Ma jiro waqti cayiman laakiin sida caadiga ah waa 30 ilaa 45 maalmood, hadda 30-kii cisho way dhammaadeen, waxa la fili karo waa labo isbuuc oo kale.”
Kulan uu Baarlamaanka federaalka Soomaaliya yeeshay bishii lasoo dhaafay ayaa si lama filaan ah kalsoonida loogala noqday xukuumaddii uu hoggaaminayay Kheyree.
Tan iyo xilligaas waxaa la hadal hayay qofka uu noqonayo siyaasiga fursadda loo siin doono inuu golaha wasiirrada mar kale soo dhiso.
Dhagta shacabka waxay u taagan tahay in madaxtooyada Soomaaliya laga shaaciyo Ra’iisul Wasaaraha cusub, arrintaasoo dhici karta xilli kasta oo nagu soo aaddan.
Qalalaasaha Tigray: Ma Dembiyo Dagaal Ayaa Ka Dhacay Itoobiya?
Hogaamiyihii Mucaaradka Ruushka Ee la Sumeeyay Oo Lagu Xidhay Magaalada Moscow
Wasiirka Arimaha Gudaha JSL Oo Xilkii U kala Wareejiyey Agaasimihii Hore Iyo Agaasimaha Cusub Ee Wasaaradaasi + Muuqaal/Sawiro
Musharax Maxamed Xasan Finad Oo Bogaadiyay Heshiiska Ay Ka Gaadheen Xukuumada Iyo Xisbiyada Mucaaradku Xiliga Qabsoomida Doorashooyinka Somaliland